ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Should we call it "Toa Payoh BURMESE Buddhist Temple Or The Branch Temple Of Kyat-Khat-Waing ?
Please understand the monks, of course they are Burmese also, and they have the feeling for the motherland. It is obvious that the "authorities" made this decision, and the monks hands are tied upon this issue.
So, please don't blame the monks, they also would have their difficulties, despite we might not understand all.
toa payoh monastery just simply too much controlled by foreigneers and they just don't feel it
and comment from the so called " monk " just simply simply can say " stupid " and i will go to hell if this will lead me too .. cos this word just shouldn't be spoken out by the son of Buddha ..
I'd say the management committe members especially myanmars are too selfish. They are afraid their family businesses would be afected if the TPY monestary becomes famous with activities.
Yeah, that's right decision. This is totally bullshit. the more we have that kind of monks, the more our country fate will be fade.
After I read your post..I do so feel very sad for our Burmese community in SG..You r right..if they don't want us to donate..may be we can use in other place such us for the kids who do not have parents,who do not have food to eat.Who run away from home country cannot go to school at border...
It's will be very great, The BUDHA and the people will say SADHU,SADHU...SADHU...
(ခ) ဆရာတော် မိန့်မှာတဲ့စကား တစ်ခွန်းကို တစ်သက်လုံး မမေ့တော့ဘူးဗျာ။ "မေတ္တာတရား ပွားများသူဆို တာ ကိုယ်တိုင်မေတ္တာတရားမရှိပဲ ပါးစပ်က ပဲ အော်နေရင် ဘာမှ မထူးဘူး" တဲ့ဗျာ။ မြန်မာ နိုင်ငံ က အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြည်သူတိုင်း ကရုဏာ၊ မေတ္တာတွေ သက်ဝင်ပြီး ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းပဲ လာရောက် မေတ္တာ ပို့ကြတာကို မေတ္တာ မရှိဘူးလို့ ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးစစ်မှ ပြောမည် မဟုတ်ပါ။
(ဂ) ဆရာတော်က သူ့ကျောင်းကို ဆောက်နိုင်တာ လက်ရှိမြန်မာ တွေ လှူထားလို့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။ သူ့ကျောင်းပေါ်လာပုံ၊ ဘဏ္ဍာငွေ ရှာရပုံက အစ အသေးစိတ် ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူက ပြောပါတယ်။ "ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် အဲလို ဆူပူ အုံကြွရုံလောက် ကျောင်းကို လာချင်ရင် တော့ မလာကြပါနဲ့၊ မလာလည်း ဘုန်းကြီးတို့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး" တဲ့ဗျာ။
Thanks for your post.This is the true story.I feel so sad.I have decided not to visit there anymore.Toa payoh's monk side with junta.
I've deciced not to go to TPY Temple again after reading your post. I don't like the nature of that temple since the first time I visited there.